Zvaunofanira kuita mushure mekuisa Ubuntu 13.10 Saucy Salamander | Kubva kuLinux
Zvaunofanira kuita mushure mekuisa Ubuntu 13.10 Saucy Salamander
Ubuntu 13.10 Saucy Salamander akaona mwenje maawa mashoma apfuura. Sezvatinoita nekusunungurwa kwega kwega kunozivikanwa distro, heano mamwe zvinhu zvaunofanira kuita mushure mekugadzira kuisirwa kubva pakutanga.
sudo apt-tora kuisa gnome-chikamu-flashback
sudo yekuwedzera-apt-repository ppa: ricotz / kuyedza sudo yekuwedzera-apt-repository ppa: gnome3-timu / gnome3 sudo yekuwedzera-apt-repository ppa: gnome3-timu / gnome3-staging sudo apt-tora sudo apt-tora kuisa gnome -shell gnome-tweak-chishandiso gnome-shell-extensions
Enda kuUbuntu 13.10 desktop dhairekitori
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Dzidziso / Mabhuku / Matipi » Zvaunofanira kuita mushure mekuisa Ubuntu 13.10 Saucy Salamander
Inonakidza. Izvo zvinoonekwa kuti Kubatana kunogona kuchinjirwa kumamwe madhesiki pasina kufa mukuyedza.
Ngatione kana ndichigona kuita dzidziso yemanyatso ekumisikidza iwo ambiance uye radiance madingindira eKDE (zvakanyanya seCinnamon).
Nenzira, handikwanise kushandisa madingindira eUbuntu paDebian Jessie neGnome (iine ese emwenje-theme package kutsamira kwakasangana). Iwo ma gtk3 maficha anozvivhara zvega, pane chero munhu anoziva nei?
Handizive. Ini handitomboshandisa Debian Wheezy uye handina kumbove nematambudziko akadaro. Kana iwe uchida, iwe unogona kuzviona mu foramu pane saiti yakatsaurirwa kuna Debian kurapa dambudziko rako zvakadzikama.
Ehe hongu, ndinomira nekufamba kwenguva, zvichave zvirinani kupindura ipapo.
Googling "gtype.c mhando id 0 haishande" uye iwe unowana mhinduro yako.
Kutenda neruzivo, ini ndichatarisa kuti ndione zvandinowana.
sudo apt-get -f yekuisa kana sudo aptitude -f kuisa kuisa iyo yakaputsika kutsamira
Tisati taita zvese ... chinhu chakanyanya kukosha, kana tichida kuchengetedza nguva, kusarudza sevha inokurumidza kwazvo yenzvimbo yedu (inowanzouya kana iri huru Ubuntu server muUS kana iyo huru server munyika medu, isiri zvinogara zvichikurumidza)
Kuti tiite izvi, tinoenda kune zvinyorwa zve software -> mune iyo tebhu «Ubuntu Software» -> «Dhawunirodha kubva ku:» isu tinosarudza «zvimwe ..» uyezve mu «Sarudza rakanakisa server»
Izvi zvichaedza eseva ese uye sarudza inomhanyisa ... kana izvi zvangoitwa isu tinogona kuita iyo yekuvandudza uye kusimudzira uye ivo VACHAZIVA ZVINOKOSHA! (kunyanya kunyika dzeLatin America nekuti maseva makuru akazara)
Pindura kune luiscuadrado123
Inonakidza ... ndichaichengeta mundangariro ...
Chinyorwa chikuru shamwari!
Nenzira, zvinhu zvekuita mushure mekuisa Kubuntu? «Hapana kana chinhu 😛
Izvozvowo zvakataurwa muMuyLinux, ye KDE 4.11. XD
Reactivate Akonadi neNepomuk kana ukasazvishandisa.
Kwete, xD ine KDE 4.11 haucherechedze kuti ivo varipo, havawanze kudya zviwanikwa uye zvese zvinofamba kunge feather.
Ndakaona kuti pandakaisa Arch + KDE.
Zvirinani kwandiri kana ndichiremadza akonadi chete (Nepomuk kana ndikaishandisa) iko kudyiwa kwakadonha kubva kubva ku470 kusvika kune inopfuura 200 MB.
Uye ndezvipi zvekuita mushure mekuisa Kubuntu?
Hahaha waizviziva here kuti "gnome-session-fallback" yakachinja zita rayo mune yazvino vhezheni? ikozvino inonzi "gnome-session-flashback" wtf? haha
Zvinosekesa, handizvo here? Asi hazvisi muUbuntu chete ... GNOME yakachinja zita ...
Yakanaka uye yakazara gwara rekuisa Ubuntu. Zvakashata kuti handina kushandisa Ubuntu kwenguva yakareba. Yangu, nhasi, ndeyeDebian Xfce kana Manjaro Xfce, kana OpenSUSE, kana Chakra. Asi pachave nemumwe munhu anomukodzera chaizvo. Kune rimwe divi uye kana ndisina kuverenga zvisizvo Ubuntu uhwu hunongova nerutsigiro kwemwedzi mipfumbamwe, izvo zvinoita sezvidiki kwandiri.
Iwo ma xorg edgers ati vatyairi vakura kwazvo, vane 13.8 kana zvisiri ini ndiri kukanganisa! , iyo ppa yave yakafa chaizvo kwemwedzi miviri! Ini ndinokurudzira kuumba mutyairi madhiri iwe nekuaisa iwo.
Zvingave zvakanaka kugona kuwana imwe "inoshanda" imwe nzira, kunyanya kune avo vachangotanga. Kana uinayo, tambidza kwandiri ... uye ini ndichagadzirisa chinyorwa. 🙂
Chirongwa chiri pane ino webhusaiti chinogadzirisa maitiro:
Kana shandura Arch repos mapakeji ku .deb ne mutorwa uye uvape iyo kuitira kuti iyo ubuntueros isatambure zvakare.
Zvaunofanira kuita mushure mekuisa Xubuntu:
-Isa iyo xubuntu-inorambidzwa-yekuwedzera.
Uye kune avo vanoshandisa Xubuntu uye vanoda imwe yechinyakare desktop:
-Bvisa iro repazasi pane Configuration Management »Panel, unogona zvakare kusvika kune iyo sarudzo nekudzvanya kurudyi pairi.
-Isa iyo menyu yeWhisker nekuwedzera iyo inotevera ppa:
sudo yekuwedzera-apt-repository ppa: gottcode / gcppa
... Wobva wagadzirisa ne sudo apt-tora-kugadzirisa uye isai iyo nekutaipa sudo apt-tora kuisa xfce4-whiskermenu-plugin
-Vanoiwedzera mumamiriro akafanana epaneru.
… Ndinofunga zvingave zvakadaro 🙂
Kune avo vanoda ku "tune" zvimwe graphic mhedzisiro, ini ndinosiya ichi chinyorwa chandakaisa kune yangu peji:
Chokwadi ndechekuti nguva ino ubuntu yakagadziridzwa zvishoma, ini handifanire kuwedzera zvakawandisa, zvirinani kuti pc yangu yaona shanduko mukutanga uye kumiswa uye kubatana kunoshanda zvishoma nekukurumidza mune iyi 13.10 vhezheni, asi vhezheni yega yega inounza zvayakanakira nematambudziko ayo. , sezvo mamwe mapakeji akanzi haachashandi uye paine nyonganiso mune zvinoenderana kunyanya kana iwe uchida kuisa chimwe chinhu chine chekuita ne i32-libs raibhurari, asi zvikasadaro yakanaka kwazvo, Kwaziso
Ubuntu haishande pane yangu pc ... zvinoitika kubvira 13.04, enda pasi, edza 13.10 uye waona dambudziko ...
Ndine mubvunzo ndinovimba munondibatsira nekundiregerera:
Mune laptop iyo yandaigara ndichiisa Kubuntu kubva pa11.04 kusvika 13.04 pasina dambudziko, izvozvi sezvo ini ndoda kuisa 13.10 mushure mekutanga kwehupenyu uye kuratidza kupenya, iyo skrini inosviba uye haina chainoita, aiwa hapana graphical nharaunda uye hapana diski. chiitiko chinoonekwa; izvi zvakange zvatoitika kwandiri kubva pandakanga ndichida kuisa iyo beta uye beta RC, uyezve pandakada kumutsiridza kubva pa13.04 yakadhawunirodha mafaera asi haina kutanga, ndakaedza naFedora, Rosa, Pear uye yakavaisa pasina dambudziko asi naKubuntu 13.10 ini ndaisakwanisa.
Iwe unoziva chero mhinduro?
Ini ndakatevera zvaakarairwa netsamba, uye pandakapinda mukati ... system yangu yakatinhira, haana kumbopinda ... Zvakaitika zvakafanana kune mumwe munhu here?
Zvakaitikawo kwandiri, mushure mekunge Kubuntu 13.04 yaiswa pandino gadziridza kusvika 13.10, inotanga asi iyo skrini inoenda yakasviba zvachose, sezvo ini ndanga ndamboedza kuisa yakachena kumisikidza ye13.10 uye haina kukwanisa kana; Ini ndinofanira kuisa Mageia 4 alpha 3 iyo inofamba mushe nekernel 3.12
Iwe unogona kuve wakanyanya kujekesa ?? Waita sei?
yanga isiri getdeb uye playdeb yaifanirwa kumiswa ???
Raul sierra akadaro
Kune avo vedu vasiri nyanzvi, izvi zvidzidzo zvakakosha kwazvo. Ndatenda.
Pindura Raul Sierra
Package kubatana-lens-kutenga ikozvino zvanzi kubatana-chiyero-kumba
saka rairo yaunotumira kuti utsvage dash harishande, iyo nzira yekuzviita muUbuntu 13.10 Saucy Salamander iri nemurairo uyu:
$ gsettings set com.canonical.Unity.Lenses yakaremara-zviyero "['more_suggestions-amazon.scope']"
Kune yangu chikamu ini ndinoida seizvi:
$ gsettings set com.canonical.Unity.Lenses akaremara-zviyero «['' more_suggestions-amazon.scope ',' more_suggestions-u1ms.scope ',' more_suggestions-populartracks.scope ',' music-musicstore.scope ',' more_suggestions- ebay.scope ',' more_suggestions-ubuntushop.scope ',' more_suggestions-skimlinks.scope '] »
Pindura kuna TheDary
Ndatenda! Ndakatochinja. 🙂
Kutenda gwara rakazara rakadai 🙂
Zvekuita Zvakanaka, fomati uye dzosera iyo yapfuura, nekuti kunaka kwangu kukanganisa kwainako!
- Ini handikwanise kuisa vatyairi ve nvidia nemaoko (kuumbidzwa kwakundikana).
- Nautilus inoratidzirwa necampamp uye inogara ichindiratidza mafaira akavanzika.
- Totem kwete kuisa chero plugin (pamberi hongu).
- Kana uchivhura combobox kubva kuGoogle chrome, dzimwe nguva inoonekwa pane imwe saiti.
- Kazam uye avconv hazvishande.
Kuongorora kushoma -> http://www.youtube.com/watch?v=g-WbWXvmfWg
Vakomana, ingangoita mwedzi kana miviri yapfuura ndakachinja TV uye nekusarwa neiyo hdmi yandakasiya Debian kwapera rinenge gore ndichiishandisa uye ndakafunga kuisa Ubuntu Gnome 13.04.
Ndakavandudza kusvika pa13.10 zuva rimwe chetero, asi kunyangwe isati yaburitswa uye ndokumira kuve Beta.
Ini handidi kuzvitambanudza zvakanyanya, kungo taura kuti ichangoburitswa uye yakaiswa Ubuntu inogona kuve musoro mukuru. Kune rangu divi, uye kana rairo ikabatsira kune mumwe munhu, ini ndinoshandisa yese nguva yekutsigira yega yega vhezheni, inopesana nezvinofungwa nevanhu vazhinji haisi mwedzi mitanhatu asi mwedzi mipfumbamwe. Ini ndakaronga uye ndikaisa zvakare pa6 kusvika Kukadzi ini handidi kuziva chero chinhu nezveUbuntu Gnome 9 izvozvi, zvinoenda sembongoro pa13.04.
Zvakanaka chaizvo ndatenda…
Yakanaka tuto, asi chinhu chega chandisingakwanise kuwana nzira yekudzikisa pasi server X, kadhi rangu iATI Raedon X1200 uye ine nguva yakaoma kushanda nguva nenguva. Ndingafarire kana iwe ukandibatsira nazvo uye ndeipi vhezheni yandinofanira kuzviita ...
Pindura kuna gasilva
uye ini handichakwanise kurodha ndiswrapper kana madhiraivho e linux ye USB wi-fi adapter. Pane chero munhu anoziva kana iyi vhezheni ine dambudziko nazvo?
Izvo zvave zvichibatsira, kunyanya kuisirwa kweCodec.
Ini ndakanga ndisati ndambovaisa pakutanga uye ndaisaziva kuti ndozvigadzirisa sei.
Pindura kuna Chelis
Wakanakisa mupiro menyu, pese pavanovhura nyowani ubuntu ps distro kuti vaedze iyo ndinovimba unoramba uchipa senge zvimwe zvakawanda.
Rutsigiro rwakanaka kune avo vedu vachangotanga… ..ATENDA
Mayorga Barrera akadaro
Ndine dambudziko, rangu revatema network kadhi rakundikana uye ini ndakaisa ENL832-TX-ICNT PCI kadhi yeneti uye ini handina madhiraivha, ndinovimba mumwe munhu anogona kundibatsira, kuisa ubuntu 12.04. Ndatenda
Pindura Mayorga Barrera
andrea g. akadaro
Mhoro zuva rakanaka! Ndine urombo ndine dambudziko neDefault kiyi dhipoziti, muUbuntu 13.10 Ndiri kunyora password uye inoratidza isiriyo, asi kana ndikapinda mune yangu terminal inondishandira, kana ini ndikapinda mushandisi password, inondishandira ! asi kwete mune yakasarudzika mhete dhipoziti, Ndapota !!! Batsirai !!!!
Pindura kuna andrea g.
Iko kuti iwo makiyi maviri akasiyana! 🙂
Haurangariri here iyo yawakaisa?
Zvimwe unofanira kuedza kuibvisa.
Mhoroi, ndine Radeon HD 7850 bhodhi raunokurudzira kushandisa varidzi kana vemahara madhiraivha?
Makorokoto pane iyo posvo, yakakwana kwazvo uye inoita senge ineintuit, ndichangopedza kuisa ndichaitevera, maita basa kwazvo!
Borja HA akadaro
Akanaka kwazvo mutungamiri, ndinokutendai zvikuru mudiwa
Pindura Borja HA
Mhoro shamwari, dzidziso yakanaka kwazvo, ingo wedzera kuti iyo fglrx-legacy inoenderana kusvika kune vhezheni 12.10 sekureva kwemunyori weiyo repository.
Ndiri pano kuyedza kudzidza s / linux. Iwe pakutanga unotaura nezve "chinongedzo" ichi handizive kuti ndinoiwana kupi, chitenge, chiwane…. Kusvikira ipapo ndakamira. Uye kwete nekuti ndine husimbe kana benzi, ini handizive.
Ndinozvigamuchira. Ini ndinojekesa hapana tsananguro yakadzama nezvazvo. Kune izvi uye zvimwe zvakafanana / zvakafanana kusanzwisisana; ndicho chikonzero chevazhinji vanodzosera (kumashure) kuGNU / LINUX.
Matambudziko neYakazara Screen muChannel? Heino mhinduro
Ndakagadziridza Nongedzo yedu yeVabatsiri